सुरक्षा निकायलाई सरकारको निर्देशन " बन्दकर्तालाई सिधै गोली हान्नु " - VOICE OF NEPAL
सुरक्षा निकायलाई सरकारको निर्देशन ” बन्दकर्तालाई सिधै गोली हान्नु “
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १०:१५ 151 ??? ???????
सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रदेशभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । सरकारले हतियार बोकेर हिँडेको फेला पारे गोली हान्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक विज्ञप्तिमार्फत आएको सूचनामा ‘हतियारसहित फेला परे तत्काल फायर खोल्नू’ भनिएको छ । ‘चन्द समूहका कार्यकर्ता हतियारसहित हिँडेको फेला परे घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मको निर्देशन छ,’ एक प्रजिअले भने ।
‘सरकारले युद्ध घोषणा गर्यो
’सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर शान्ति प्रक्रिया बिथोलेको चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताए । ‘सशस्त्र युद्धपछि सरकारले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता अब भंग भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैं गृहयुद्ध घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयलाई हामी खारेज गर्न चाहन्छौं । हामी आफैंले युद्ध गरेका छैनौं । सरकारले देश र जनतामाथि थोपरेको अन्यायपूर्ण युद्धको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं ।’
‘सर्च एन्ड एरेस्ट अपरेसन’कालीकोट– कालीकोटमा प्रहरीले चन्द समूहविरुद्ध ‘सर्च एन्ड एरेस्ट अपरेसन’ सुरु गरेको छ । सरकारले चन्द समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कालीकोट प्रहरीले मंगलबार राति जिल्लाको माल्कोट, कोटवाडा, मुम्रा, फुकोट, रेगिंललगायत ठाउँमा सर्च गरेको थियो । प्रहरी टोली बुधबार बेलुकी पनि सर्चका लागि गाउँ खटिएको छ । ‘नेतालाई लक्ष्य गरेका छौं, सानातिनालाई तत्काल समात्दैनौं,’ डीएसपी विनोद शर्माले भने । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले चन्द समूहका नेता–कार्यकर्तालाई लुकाउने गरेको आरोप पनि लगाए ।